War - Maxaad ka ogtahay baakadda hadiyad-dhamaadka sare ee baakadka?
Ku saabsan qeexida sanduuqa hadiyadaha dhamaadka-sare, xitaa haddii raadinta Google, sidoo kale ma lahan qeexitaanno sax ah, qeexitaanka qof walbana wuu ka duwan yahay, qodobkaan wuxuu ka hadlay sanduuqa hadiyadaha sare, badanaa loogu talagalay sanduuqa dhajinta, oo u baahan geedi socod badan , oo ubaahan sanduuq dhejis ah oo faahfaahsan, nuxurka tixraaca asxaabta:
Sanduuqa hadiyadu waa shaqo fidinta baahida bulshada ee baakadaha, kaliya ma lahan doorka baakadaha waxayna muujineysaa qeyb ka mid ah doorka illaa xad, heerka ugu fiican ee sanduuqa hadiyadu waa mid toos u dhigma si loo kordhiyo qiimaha alaabtu, ilaa xad, waxay wiiqaysaa qiimaha isticmaalka alaabta. Si loo muujiyo qiimaha sheyga, dahaadh ka qaalisan oo qurux badan ayaa loo isticmaali doonaa in lagu ilaaliyo badeecada. Ma jiro wax baakad guud ah oo ku jira isku xirka wareegga wareegga oo sidaas ku habboon, qiimaha hadiyaddu aad u sarreyso, qiimaha wareegga wareegga ayaa daruuri ah inuu sarreeyo, sida ka xor shilka, ka madaxbanaan cilladaha iyo wixii la mid ah. Shaki kuma jiro inay saameyn aad u sareysa ku leh qurxinta alaabada si ay u soo jiito macaamiisha.
1. Kala soocida sanduuqyada hadiyadaha ee heerka sare ah
Laga soo bilaabo qaybta dhar dhajinta, waxa ugu muhiimsan waa: warqad, maqaar, maro, iwm.
Qeybta waraaqaha: oo ay ku jiraan warqad kartoon dahab iyo qalin ah, warqad luul ah iyo dhammaan noocyada waraaqda farshaxanka;
Maqaarka: oo ay ku jiraan maqaarka iyo ka hortagga maqaarka PU, iwm.
Maro: oo ay ku jiraan dhammaan noocyada suufka iyo dharka linenka ah.
Laga soo bilaabo baaxadda dalabka, qaybaha ugu waaweyn waa kiimik maalinle ah, khamri, cunto, tubaako, elektaroniga elektarooniga ah, dahabka iyo wixii la mid ah.
Nooca kiimikada maalinlaha ah: inta badan loo isticmaalo qurxinta, barafuun labadan goobood;
Khamriga: badanaa khamri cad, khamri cas iyo dhammaan noocyada khamriga shisheeye;
Nooca cuntada: inta badan shukulaatada iyo cuntada caafimaadka;
Nooca Tubaakada: waxyaabaha badeecada-dhamaadka sare leh oo ay bilaabeen shirkadaha waaweyn ee tubaakada;
Elektaroonigga elektarooniga ah: sida sanduuqa taleefanka gacanta ee sumadda sare, sanduuqa kumbuyuutarka kiniinka, iwm.
Dahabka: Dahabka noocyadiisa kala duwan asal ahaan waa qaab u gaar ah baakadaha hadiyadaha hadiyadeed si loo xakameeyo shakhsiyaddooda.
2. Habka wax soo saar ee sanduuqyada hadiyadaha ee heerka sare ah
Habka wax soo saarka ee sanduuqa hadiyadaha ayaa aad uga dhib badan sanduuqa xaashida ah. Farsamaynta sanduuqa waraaqaha isku laaban ayaa guud ahaan lagu dhammeeyaa iyadoo la daabacayo finishing dusha sare lagu dhammaystirayo (naxaas, qalin, filim, UV-ga maxalliga ah, isweydaarsiga, iwm.), Dhimashada-goynta iyo dhajinta dhajinta kormeerka iyo xirxirida.
Nidaamka wax soo saarka ee sanduuqa hadiyadaha waxaa lagu dhammeeyaa daabacaadda ➝ dusha sare ee wax lagu dhammeeyaa dhinta goynta cawl➝ dhintaa goynta cawlka ➝ jeexjeexa guddi cawlan sameynta iyo waxyaabaha lagu dhejiyo ka hor kulanka, kormeerka iyo xirxirida.
Laga soo bilaabo geedi socodka labada shey, habka wax soo saar ee sanduuqa hadiyadu waa mid dhib badan oo culeys badan, iyo heerka farsamada ayaa aad uga badan tan sanduuqa waraaqaha isku laaban. Inta badan sanduuqyada hadiyadaha ee heerka-sare ee caadiga ku ah nolosheena maalinlaha ah waxaa laga sameeyaa warqad, dusha sare ee warqaddu sidoo kale waa tan ugu habboon codsashada daaweynta teknoolojiyad badan.
3. Ciladaha guud iyo dhibcaha xakamaynta tayada
Loose edge: ka dib markaad ku dhajiso warqadda afarta gees ee sanduuqa jirka, xajintu ma ahan mid ciriiri ah, waxaana jira dhacdo la joojiyay oo udhaxeysa warqadda iyo sabuuradda cawlan.
Laablaab: Ka dib markaad ku dhajiso dusha sare ee warqadda si aad u sameysid qaab aan caadi ahayn, dherer kala duwan oo ah meeraha dhintay.
Xaglo jaban: warqad ayaa waxyeello ka soo gaadhay afarta gees ee sanduuqa ka dib markii la dhajiyo.
Soo-gaadhista boodhka (soo-gaadhista hoose): saxsanaanta soosaarka saxanka mindhicirku sax maahan, ama dheellitirka hawlgalka dhejinta, taasoo keentay waraaqda dhajinta la laalaabo ka dib kala bixidda xayndaabka, taasoo keentay saxanka ash ee soo ifbaxay.
Xumbada: Xumbo aan caadi ahayn oo kor loo qaaday, xumbo kala duwan oo dusha sare ee sanduuqa ah.
Wasaqda xabagta: Raadadka xabagta ku hartay dusha sare.
Protrusion: waxaa jira haraaga maaddada granular ee lakabka hoose ee qalabka wax lagu rakibo, dusha sare ee taageerada maxalliga ah, oo dhaawaceysa fiditaanka dusha sare ee sanduuqa.
Xaglo sare iyo mid hoose: guddi cawl kala badh iyada oo loo marayo dhimista ama jeexitaanka, afarta dhinac ee isku laabka ah ee samaysanaya laba dhinac oo isku dhafan oo dhererku iswaafaqsan yahay.
Biyaha jiingado: ka dib marka la dhajiyo jirka sanduuqa, si looga dhigo cidhifyadiisa iyo geesaheeda isafgarad badan, sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah in loo isticmaalo xoqista si loo xoqo afarta gees ee jirka sanduuqa, maxaa yeelay xooggu ma aha mid caadi ah, geeska oo dhan ayaa soo muuqan doona dherer, concave iyo strix convex ama xumbo yar, sida biyaha jiingado.
4. Qaab dhismeedka guud ee kartoonka heerka sare ah
Sanduuqa hadiyadaha ee noocyada dhammaan noocyada, laga soo bilaabo qaab-dhismeedka kor iyo hoosba leh isku-darka daboolka iyo foomka daboolka salka, oo lagu dhex daray sanduuqa kartoonka, waxaa jira furitaanka iyo xiridda nooca albaabka, nooca isku-darka dahaarka leh ee buuggan, kuwan noocyada la dhigay qaabdhismeedka aasaasiga ah ee sanaadiiqda hadiyadaha, iyadoo la raacayo qaab dhismeedka aasaasiga ah, naqshadeeyayaasha ayaa soo saaray nooca sanduuqa borotiinka, illaa xirxirida alaabta la gelinayo magaca qabow, Kuwa soo socda ayaa ugu horreyn doona dhammaan nooca sanduuqa guud iyo magaca si loo muujiyo :
1) daboolka iyo sanduuqa daboolka salka
Daboolka iyo daboolka salka waxaa loola jeedaa nooc ka mid ah sanduuqa. Daboolka kartoonka waa "dabool" hoostana waa "sal", sidaas darteed waxaa loogu yeeraa daboolka daboolka iyo salka.Lid iyo daboolka salka, oo sidoo kale loo yaqaan daboolka iyo sanduuqa salka, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhammaan noocyada hadiyadda adag sanduuqa, sanduuqa kabaha, sanduuqa nigiska, sanduuqa shaati, sanduuqa taleefoonka gacanta iyo noocyada kale ee sanaadiiqda baakadaha
2) Sanduuqa buugaagta
Qolofku wuxuu ka kooban yahay qolof iyo sanduuq gudaha ah, giraan qolof ah oo ku jirta sanduuqa gudihiisa muddo toddobaad ah, gunta hoose ee sanduuqa gudaha iyo gidaarka dambe, labada qolof ee qolofku waa isku dheggan yihiin, iyo qaybta daboolka kore ee unglued ayaa la furi karaa, qaabka dibeduna wuxuu u eg yahay buug adag.
3) Sanduuqa khaanadaha
Haddii daboolka iyo sanduuqa daboolka salka uu qofka siin karo nooc dareen dareen leh, ka dib sanduuqa khaanadda ayaa nooc qarsoodi ah u samayn kara qofka. Waxay ku tiri wax qarsoodi ah, maxaa yeelay fiirinta qaabkeeda waxay dadka ka dhigeysaa nooc qiiro leh oo aan sugi karin inay ka soo baxaan muuqaalka gudaha "khasnadda".
Laabkan khaanadaha wuxuu u dhashay inuu noqdo sanduuqa maalka. Daboolida nooca sanduuqa daboolkiisu waa qaab tuubbo leh, jirka sanduuqa qaabkiisuna yahay qaab disk ah, sanduuqa daboolka sanduuqa jidhkiisu waa laba dhisme oo kala madax bannaan. Qaabaynta tusaalaynta sidaas, ha furto noqo nooc madadaalo ah. Si tartiib ah u jiidaya daqiiqada waxay noqoneysaa raaxo deg deg ah.
4) Sanduuqa laba geesoodka ah
Qaabka sanduuqa waa lix geesoodle, badankoodna waxaa lagu daboolaa dabool iyo salka.
5) Sanduuqa daaqada
Fur daaqadda la doonayo hal ama in ka badan dhinacyada sanduuqa, oo ku dhaji PET hufan iyo qalab kale oo ku yaal dhinaca gudaha si aad si buuxda ugu muujiso macluumaadka waxyaabaha ku jira.
6) Sanduuqyada isku laaban
Boodhka 'Gray' sida qalfoof, warqad naxaas ah ama waraaqo kale lagu dhajinayo, oo laalaabaya guddi cawlan si looga tago masaafo cayiman, isticmaalka oo dhan qaab saddex-cabbir ah, ayaa si xor ah loogu laaban karaa.
7) Sanduuqa diyaaradaha
Sanduuqa diyaaradda, muuqaalkeedu wuxuu u eg yahay diyaarad la magacaabay, waxaa iska leh laan ka mid ah kartoonka, waa baakadaha la muujiyo, rarka la doorbido, oo ka sameysan warqad jiingado ah.
Kuwani waa qaababka sanduuqa hadiyadeed ee ugu caamsan suuqa, waxaana jira sanduuqyo badan oo gaar ah oo qaab gaar ah u gaar ah oo aan lagu xusin mid.
Sida baakadaha wax soo saarka guud ee hadiyadeed ee suuqa, sanduuqyada hadiyadaha ee heerarka sare ayaa si sii kordheysa u jecel yihiin milkiilayaasha sumadaha. Qaab dhismeedka, agabka iyo teknolojiyada sanaadiiqda hadiyadaha ayaa sii kordhaya hodan. Sida shaqo wanaagsan loogu sameeyo baakadaha iyo daabacaadda sanduuqa hadiyaddu waa dhibaato ay shirkadaha daabacaaddu hubaal wajihi doonaan.